PowerShell ikozvino yave kuwanikwa yeLinux | Kubva kuLinux
PowerShell ikozvino yave kuwanikwa yeLinux
pedrini210 | | GNU / Linux, Noticias, Kuronga, Networks / Maseva, Dzidziso / Mabhuku / Matipi
1 Chii chinonzi PowerShell?
2 PowerShell paLinux
3 PowerShell Kuisa Maitiro (DSC) paLinux.
Chii chinonzi PowerShell?
PowerShell Igobvu, ndiko kuti, chinongedzo chekushandisa iyo inoshanda system, iyo inoshanda kune zvese zvine chekuita nekugadziriswa kuburikidza nemirairo yemirairo (mukurumbira, koni kana terminal), kuita mabasa pamushini une Windows inoshanda sisitimu, kusvika zvino .
Zvemukana uno tinokuunzira mashoko akanaka!PowerShell ikozvino inowanikwa yeLinux! Isu takanga tamboziva nezve kuenderana kwe Bash paWindows, chimwe chinhu chaifadza vazhinji. Naizvozvo, hazvishamise kuti Linux vanhu ikozvino vanogamuchira PowerShell rutsigiro mune yayo Open Source vhezheni. Kunyangwe pfungwa hombe yeMicrosoft isiri yekudhonza vashandisi veLinux kuWindows, iko kuchinjika kunoratidzwa neiyi software imba kunofanirwa kutariswa kune iyo Open Source nyika. Uye zvakanyatsojeka kana isu tichireva kune rutsigiro rwunopihwa kune vanogadzira vanoshandisa PowerShell kana vanoshanda neNet.
Kuenda zvakadzika zvishoma muPowerShell yekumisikidza maitiro emuchina wako weLinux. Kunyangwe kutanga zvakanaka kuti iwe uzive kuti ndeapi masisitimu aripo kana anoenderana mukushandisa PowerShell; Ubuntu Server 12.04 LTS, 14.04 LTS uye 16.04 LTS, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11 na12, Debian GNU / Linux 6 na7, Red Hat server 5, 6 na7 uye CentOS 5, 6, uye 7.
PowerShell Kuisa Maitiro (DSC) paLinux.
Kutanga, zvakakosha kutanga waisa iyo Open Management zvivakwa kana OMI, usati waisa PowerShell. Unogona kudhawunirodha OMI nekuwana zvinotevera link.
Paunenge uchiisa OMI zvinodikanwa kuisa mapakeji anodikanwa zvinoenderana neLinux system yaunoda kushanda nayo. Mune ino kesi .deb kana .rpm. Iwo masisitimu ayo akanyatso kusanganiswa ne DEB ndeweDebian GNU / Linux uye Ubuntu. Muchiitiko che RPM mapakeji isu tinowana Red Hat, CentOS, SUSE uye Oracle.
Nekuita unotevera kuraira iwe unogona kuisa OMI pane CentOS 64 x7 system:
Izvo zvinodawo kuisa mapakeji OpenSSL mushanduro yayo ssl_098 kana ssl_100 yekuita kwakakwana; yekutanga inoshanda neshanduro yakaiswa pane iyo OpenSSL 0.9.8 michina, uye yechipiri neiyo OpenSSL 1.0 vhezheni. Kuwedzera iwe unofanirwa kuve neyakavakirwa pakombuta yako ye x64 / x86. Kana iwe uchida kuziva iyo yakaiswa vhezheni yeOpenSSL isa unotevera kuraira kune iyo terminal:
Kana zvese zviri pamusoro zvaitwa, unogona kumhanya unotevera kuraira kuisa DSC (PowerShell) pane CentOS 7 ye64 system:
Izvo zvakanaka kuti uzive kuti timu yako ine zvinotevera hunhu kuita kuitiswa kwePowerShell chimwe chinhu chakanakisa uye pasina matambudziko:
Inodiwa pasuru: glibc
Tsananguro: GNU Raibhurari
Chishoma vhezheni: 31.30
Inodiwa pasuru: Python
Chishoma vhezheni: 2.4 kusvika 3.4
Inodiwa pasuru: omiserver
Tsananguro: Vhura Management Zvivakwa
Chishoma vhezheni: 1.0.8.1
Inodiwa Package: Openssl
Tsananguro: Iyo OpenSSL Raibhurari
Chishoma vhezheni: 0.9.8 kana 1.0
Inodiwa package: ctypes
Tsananguro: Python ctypes raibhurari
Minimum vhezheni: Inofanirwa kuenderana neiyo Python vhezheni
Inodiwa pasuru: libcurl
Tsananguro: cURL HTTP mutengi raibhurari
Chishoma vhezheni: 7.15.1
Kana zvese zviri pamusoro zvangoitwa, zvinokwanisika kuti iwe ushandise PowerShell pasina matambudziko mukugadzirisa kweLinux system yako. Rangarira kuti zvinowirirana chete nehurongwa hwatataura pamusoro, uyezve unofanirwa kuisa mapakeji akakodzera ekuitwa kwayo.
Aya matsva maficha muWindows zvishandiso zvinoenderana nezvinodiwa nevashandisi vazhinji, kuiswa kana kuenderana kweese masystem (Linux neWindows) kuitira kuti vashande zvishoma zvishoma pamwechete. Yakazara kukwirwa neumwe neumwe ichiri kure nzira, asi nematanho akaita seaya, ayo anotyaira kusimudzira kwemabasa akakosha sekumisikidza manejimendi, pane zano pane zvinotevera kufambira mberi, izvo zvinonyatso shandura ava vanokwikwidza kubva komputa muvabatsiri pamabasa emumwe neumwe mukati mehurongwa hwavo.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve kuisirwa kana kumisikidzwa kwePowerShell unogona kuwana iyo peji yepamutemo kubva kuMicrosoft kune rumwe ruzivo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » GNU / Linux » PowerShell ikozvino yave kuwanikwa yeLinux
Ngirozi ortiz akadaro
Wow! Iko kunakidzwa, ndedzipi nhau dzakanaka. Ndanga ndakamirira kwemakore akawanda kudaro! Mahwindo marara, vane chinhu mumaoko. Vanoda kuita saSauron, vatisunge tose murima.
Pindura Mutumwa ortiz
Mario Guillermo Zavala Silva akadaro
Chii chiri chinangwa chekuisa windows Powerhell paLinux !!! ??? Kana yedu terminal iine simba rakanyanya ... ndokumbira? Zvichava kuti ndinogona kuita zvirinani zvinhu kana chii chiri IDEA !!!!
Pindura kuna Mario Guillermo Zavala Silva
Mubvunzo ndewokuti gehena ungade kuisa PowerShell ne bash kana zsh? Izvo hazvina musoro. Zvinoita sekunge uchashandisa notepad yewaini pane kushandisa gedit kana kate ………
Zvese zvinonongedza kumaseva .net uye azure nematurusi ese, pamwe kuchine vanhu vanoishandisa kurangarira kuti havazi vese vanovandudzwa uye mazhinji masevhisi anoshanda nema windows. Afip kesi nezvimwe.
Kana chiri chokwadi kuti iyo vim terminal uye vamwe vane simba, asi zvese zvinoenderana nekushandisa.
Ndine mubvunzo mumwechete sevamwe, zvine musoro here kuti uve nehelhelhell paLinux? Pane chikonzero chekuishandisa? Ndezvipi zvakanaka izvo Bhash kana zsh zvine Linux?
Ini pachangu, ini handina kana chinangwa chekuisa iyo, hapana chikonzero chakajeka, asi zvinoita sekunge chinangwa cheMicrosoft kuburitsa kodhi yemamwe mitezo yeLinux kuti ape - ndiko kuti, basa rakachipa.
Dzoreredza traffic kubva kune imwe IP uye chiteshi kune imwe IP uye chiteshi
Tumira faira kuFTP nemirairo imwechete